थप २४६ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि, १११ जना डिस्चार्ज « Mechipost.com
थप २४६ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि, १११ जना डिस्चार्ज
प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०७७, आईतवार १७:२५
फिदिम । कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु भएको र देशभरि २४६ जनामा कोभिड–१९ पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतवार जानकारी दिएको छ।
यससँगै अहिलेसम्म कोभिडका कारण मृत्यु हुने सङ्क्रमितको संख्या ५७ पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । शनिवार अपराह्नपछि विभिन्न जिल्लामा थप २०,३३२ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
निको हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । विगत २४ घण्टामा १११ जना निको भएसँगै अहिलेसम्म १४,६०३ जना अर्थात् ७१.८ प्रतिशत रोगमुक्त भएका छन् । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अहिले सक्रिय सङ्क्रमण भएका व्यक्तिको संख्या ५,६७२ छ ।
आइतवार पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरू विभिन्न जिल्लाका हुन् । उनीहरू विभिन्न उमेर समूहका छन् । तीमध्ये काठमाण्डौँ उपत्यकाका ३१ जना छन् । मन्त्रालयका अनुसार सङ्क्रमितमध्ये पर्साका ८१ र धनुषाका ३५ जना छन् ।
पर्सामा सङ्क्रमण देखिनेमा मास ट्रेसिङअन्तर्गत तथा स्वेच्छाले आफैँ शुल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण गराएकाहरू भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । काठमाण्डौँ जिल्लामा थप २२, ललितपुरमा आठ र भक्तपुरमा एक जनामा कोरोनाभाइरस देखिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाण्डौँ उपत्यकाका मुख्य प्रवेशद्वार नागढुंगा, साँगा र फर्पिङमा साउन १० गतेदेखि १६ गतेसम्म १०,८२७ जनाबाट नमुना सङ्कलन गरिएको र परीक्षण भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले अहिले मृत्युको पुष्टि गरेकी व्यक्ति पर्साकी हुन् । वीरगन्ज महानगरपालिका नगवाकी ६८ वर्षीया महिलाको शनिवार साँझ मृत्यु भएको थियो । उनमा साउन १६ गते कोभिड पुष्टि भएको थियो ।
ज्वरो र निमोनिया भएपछि उपचारका लागि गत बुधवार ती वृद्धालाई एउटा निजी अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी कोभिड अस्पतालका चिकित्सक डा. निरज सिंहले जानकारी दिनुभयो । डा. सिंहका अनुसार श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई थप उपचारका लागि कोभिड विशेष अस्थायी अस्पताल गण्डकमा ल्याउने क्रममा बाटामै मृत्यु भएको थियो ।
मन्त्रालयले उनमा मधुमेह र उच्च रक्तचापको समस्या पनि भएको जनाएको छ । विगत २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ८,८६१ वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले देशभरि १०,९०० भन्दा केही बढी मानिस क्वारन्टीनमा छन् । तीमध्ये गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुनेको संख्या सर्वाधिक छ ।
अहिले रौतहट र कैलाली जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् । भोजपुर, संखुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा भने सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या शून्यमा झरेको छ ।